Scribble 🥇 Faka futhi Jabulela kusuka Emulator.online
Scribble . Ukwenza isilulumagama kunoma yiluphi ulimi kungumsebenzi odinga ukuzinikela. Kuthiwani uma, ukusiza ngalo msebenzi onzima, ungathembela ekukhuthazeni umdlalo ojabulisayo nowokuncintisana okukhulu? Imayelana neScribble, umdlalo wamagama waseMelika, owenziwe ngo-1930 futhi kusukela lapho wahunyushelwa ezilimini ezingama-22.
Scribble: ungadlala kanjani igxathu negxathu?
Ukudlala i-backgammon online mahhala, nje landela le miyalo yesinyathelo ngesinyathelo :
Isinyathelo 1 . Vula isiphequluli sakho osithandayo bese uya kuwebhusayithi yomdlalo emulator.online.
Isinyathelo 2 . Ngokushesha nje lapho ufaka iwebhusayithi, umdlalo uzovele uboniswe esikrinini. Kufanele ukhethe igama ukuqala ukudlala. Uma ufisa, ungakhetha futhi isithombe. Chofoza " Dlala " futhi ungaqala ukudlala, khetha ukudlala ngokumelene nomshini noma dlala nomngani oyedwa noma abaningi.
Isinyathelo 3. Nazi izinkinobho ezithile eziwusizo. Ungakwazi " Faka noma susa umsindo ", cindezela u-" Play "inkinobho bese uqala ukudlala, unga" ikhefu "futhi" Qala kabusha "nganoma yisiphi isikhathi.
Isinyathelo 4. Ukunqoba umdlalo kufanele wakhe amagama ebhodini. Uhlamvu ngalunye lunamaphuzu . Noma ngubani othola amaphuzu amaningi ekupheleni komdlalo uzowina.
I-Scribble ngumdlalo webhodi lapho abadlali bayo (2-4) bezama ukufaka amaphuzu ngokwakha amagama axhunyiwe , kusetshenziswa amatshe ezinhlamvu ebhodini ahlukaniswe Izikwele eziyi-225 .
Abantu abaningi bakholelwa ukuthi abasunguli beSchulble yibo UJames brunot futhi UHelen Brunot , kodwa empeleni kwakungewona umqondo wabo, kunalokho umsunguli weSchulble ngu-Alfred Butts , umakhi wezakhiwo wasePoughkeepsie, eSifundazweni SaseNew York.
Unyaka wawungu 1931 , futhi njengabaningi abasanda kusebenza, uButts ubenesikhathi esanele sokusindisa. Uthathe isinqumo sokuqhamuka nomdlalo omusha obuthembele enhlanhleni futhi ngokwengxenye ekhonweni.
U-Alfred Mosher Butts, wafunda amakhasi angaphambili ephephandaba i-New York Times ukubala ukuthi izinhlamvu ezithile zazinikezwa kangaki ngolimi lwesiNgisi (kodwa wehlisa ukwenzeka kwe- “S” ukuze umdlalo ungabi lula kakhulu), futhi unikeze inani ngalinye ngokuya ngokutholakala kwalo.
Alikho ibhodi ebelidingeka ngoba amathayili ahlelwe ngokohlelo lwegama eliphambanweni. Wanikeza lo mdlalo igama Lexicon .
Isicelo sakhe se-patent asemukelwanga, futhi nabenzi bemidlalo bebengenantshisekelo, ngakho-ke ngo-1938, walungisa umdlalo ngokungeza i- 15 x 15 ibhodi ngezikwele ezinamaphuzu aphezulu no amathayili ayisikhombisa lectern (izici ezisasele). .
Waphinde washintsha igama waba ngu Ama-Criss-Crosswords , kodwa futhi i- Ihhovisi lobunikazi nabenzi bomdlalo bebengafuni kwazi lutho. Ngemuva kokuphothula okumbalwa, wabuyela emsebenzini wakhe wangaphambilini wokuba ngumdwebi wamapulani.
Ngo-1948, uJames Brunot , ongumnikazi womunye wale midlalo embalwa, uthe uzimisele ukuzama ukuyimaketha ngempumelelo. Ukushintshanisa ilungelo lobunikazi, UBrunot uthole amalungelo obunikazi .
Ngisabalalise kabusha izikwele zemiklomelo, ngenza lula imithetho, futhi ushintshe igama laba ngu Scribble , okuyinto kwaziwa ngalo lowo nyaka ngo-1948 naseGreat Britain ngo-1953 .
Esebenza ekhaya, wathengisa imidlalo engaphezu kwengu-2,000 1949 ngo-1952. Ngo-XNUMX kwavela igama futhi ukuthengisa kwaqala ukukhuphuka, ngesikhathi uBrunot esezophonsa ithawula.
UJack Strauss, umphathi esitolo sikaMacy, wadlala ngenkathi eseholidini. Lapho ebuya wacela umnyango wakhe wezemidlalo ukuthi umthumelele eminye yawo, kepha sasingekho isitoko.
AbakwaMacy baqala ukuxhasa imizamo yokuphromotha, futhi ngenxa yokuthi uBrunot akakwazanga ukuhambisana nokwenyuka kwezentengiso, yanikeza imvume yokukhiqiza Selchow & Righter . Amalungelo angaphandle kwe-United States, Canada ne-Australia athengiselwa i-JW Spears, inkampani yaseBrithani. Isicelo sokuqala saseBrithani selungelo lobunikazi senziwa kuphela ngo-1954.
Izinguqulo ezahlukahlukene ziyadingeka ngezilimi ezahlukahlukene ngoba imvamisa yezinhlamvu ngisho nezinhlamvu ngokwazo ziyahlukahluka (ngokwesibonelo, iSpanish inezinhlamvu u-LL no-CH). Sekuthengiswe imidlalo engaphezu kwezigidi eziyi-100 ngezilimi ezingama-29. UJames Brunot washona ngo-1984 no-Alfred Butts ngo-1993.
Imithetho izohlala incike ekutheni udlala nobani futhi cishe ngeke iphoqelelwe ngokuphelele.
Scribble ingadlalwa ngenombolo ephakathi kwabadlali ababili kuya kwabane .
Kukhona ibhodi lesikwele elinezikwele eziyi-15 eceleni.
Ngamunye uzoba nelungelo lokuthola izinhlamvu eziyisikhombisa kumjikelezo ngamunye.
Umdlalo uqala uma uthatha incwadi esondele kakhulu ku-A noma ku-A.
Uhlamvu ngalunye lunenombolo enenani elihambelanayo.
Ibhodi liqukethe izikwele eziphindaphinda inani lezinhlamvu noma amagama, uma uhlamvu noma igama lidlula lelo nani. Lawa magugu angaphindwa kabili noma kathathu.
Uma umdlali ekwazi ukwakha igama esebenzisa izinhlamvu eziyisikhombisa esandleni sakhe, yena ngokuzenzekelayo amaphuzu amaphuzu 50 .
Ku-Scribble, akukhona nje ngokwakhiwa kwamagama, isu ngukuqoqa amaphuzu ngezinhlamvu ezinhle nezikwele ezinhle.
Ngemuva kokuhamba kokuqala, abadlali kumele basebenzise okungenani uhlamvu olulodwa olusivele lukhona ebhodini lomdlalo.
Umdlalo uphela lapho izinhlamvu zomdlalo ziphela futhi bonke abadlali sebethathe isinyathelo sokugcina. Amaphuzu lapho umdlali ngamunye ahlala khona esandleni akhishiwe kunani lawo.
• Ukube zonke izingcezu zeSribble ezikhiqizwe kuze kube yimanje zazibekwe eceleni, bekuzokwazi ukwenza umugqa oqhubekayo okwazi ukuzungeza uMhlaba amahlandla ayisishiyagalombili.
• Amasosha amabili ayevaleleke ekudalweni okweqile e-Antarctica ngo-1985. Adlala iScrubble ngokuqhubekayo izinsuku ezinhlanu, aze atakulwa.
• Izibalo zithi imidlalo engama-30,000 Scribble iyaqalwa njalo ngehora elidlulayo.
• Ulimi lokugcina okwakhiqizwa ngalo iScrabbrle isi-Welsh, inguqulo yalo yethulwa ngo-2006.
• Kulinganiselwa ukuthi kukhona okungenani izingcezu zemidlalo ezilahlekile okungenani eziyisigidi ezisabalele emhlabeni jikelele.
• Ngo-1993, i-Scribble Dictionary esemthethweni yaseNyakatho Melika yakwenqabela konke ukuhlambalaza nokuhlambalaza izinhlanga.